Ozbekistàna: Yusuf Juma, Poeta Martiora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2018 7:58 GMT
Androany, any Ozbekistàna, izay nampanginina tanteraka ny fahalalahan'ny feo, dia tsy misy sahy manentana, fa fanehoana ny hevitra fanoherana ny governemanta fotsiny. Fa tsy momba ny raharahan'ilay poety mpanohitra, Yusuf Juma, izany, satria ny tononkalony dia feno fiaretana sy fanahiana momba ny fireneny sy tanindrazany martiora, nifamatotra tamin'ny antso ho an'ny demokrasia sy ny fitsipi-dalàna.
Teraka tamin'ny 1958 tao Bukhara faritra Ozbekistàna i Yusuf Juma (Jumaev). Nanomboka nanoratra tononkalo tamin'ny fahatanoràny, tany amin'ny ambaratonga ambony. Mifantoka indrindra amin'ireo olana iankinan'ny ain'ny vondrom-piarahamonina misy azy ny tononkalony, toy ny famotehana ny làlam-piaramanidina izay nampiantrano ireo fiaramanidina namendraka fanafody famonoana bibikely teny an-tsaha, izay nanelingelina ny fahasalaman'ny olona. Efa tamin'izany fotoana izany, no nenjehan'ny governemanta sovietika i Juma, ary rehefa nirodana izany, dia nitsikera an-kalalahana ireo mpitondra vaovao ihany i Juma, satria ireo manampahefana kaominista sovietika – ny apparatchiks – dia mbola teo amin'ny fitondrana ihany.
Ireo zava-nitranga tao Andijon no nahatonga an'i Yusuf Juma hanoratra andianà tononkalo mitondra ny lohateny hoe “Andijon turkumidan” [Avy amin'ny angona Andijon -Ozbeky]. Nikarakara fivoriana maro mitaky ny hamotsoran'ny governemanta ireo mpanao tononkalo mpanohitra sy ireo mpiaro ny zon'olombelona voagadra i Juma niaraka tamin'ny zanany lahy sy ny namany. Nanomboka tamin'io fotoana io, dia nanjary lasibatry ny National Security Agency (SNB) i Yusuf Juma sy ny fianakaviany.
Matetika izy sy ny fianakaviany no nampangaina ho nanao heloka bevava noforomporonina. Tamin'ny 25 Jolay 2007, nigadra ny zanany lahy Mashrab, ary volana iray taty aoriana dia navotsotra satria tsy nisy porofo ny fiampangana azy. Ny 10 desambra 2007 no andro ratsy indrindra tamin'ny fiainan'i Jumaev. Efa alimbe tamin'izay, notafihan'ny Andian-Tafika Manokan'i Ozbekistàna ny tranon'i Juma. Na afaka nandositra aza i Juma sy ny fianakaviany, dia voasambotry ny SNB ihany herinandro taty aoriana ary voalaza fa nampijaliana tany am-ponja.
Satria azo antoka fa lavitry ny resaka tahàka izany ireo haino aman-jery fehezin'ny fanjakana any Ozbekistàna, dia matetika ireo bilaogy mpitsikera any Ozbekistàna no mamoaka ireo asan'i Yusuf Juma sy ireo lahatsoratra mikasika azy. Tsy mpanao heloka bevava i Yusuf Juma, fa mahery fon'ny firenena hoy ny bilaogy Rizobek. Noho izany, tsy izy no tokony ho entina hotsaraina fa ireo izay nampiditra azy am-ponja :
Tsy Yusuf Juma, fa izay nanafika azy no tsy maintsy entina eo amin'ny fitsarana. Tsy Yusuf Juma fa ireo izay nanao iny fanenjehana iny ho lalàna no tsy maintsy entina eo amin'ny fitsarana. Tsy Yusuf Juma fa ireo izay tsy mahazaka ny feony malalaka no tokony entina any amin'ny fitsarana. Tsy i Yusuf Juma fa ireo izay maneso ny demokrasia ka miverina sy mahazo tombony amin'ny fanjakana tsy refesi-mandidy no tsy maintsy entina amin'ny fitsarana! [uzb]
Antsoin'ny masoivohom-baovao UzNews.net ny mpamaky azy mba hanohana ny gadra Y. Juma amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasy fanohanana any amin'ny sampan-draharaha mpifandray amin'ny gazety ao amin'ny fiadidiana ny lapam-panjakana :
Tsy mahagaga antsika ny herimpon'i Yusuf Juma, fa mandona antsika. Na teo aza ny habibiana sy ny famadihan'ny fitondrana ankehitriny — izay nampitsangam-bolo niaraka tamin'ny mpitandro filaminany sy ireo fiara mifono vy entina miady amin'izao tontolo izao sy ny fireneny manokana — dia nambaran'i Yusuf Juma izay avy any amin'ny faritra lavitra any Bukhara ny tsy fanekeny an'izany…
Navoakan'i Muhiddin ao amin'ny neweurasia, izay olona mahafantatra tsara an'i Yursuf Juma, ny taratasin'ilay poety, izay nanoratany ny mikasika ny fanafihana mitàm-piadiana tao amin'ny tranony ary ny fomba nandosirany sy ny fianakaviany :
Nihazakazaka tsy nanao kapa izahay. Ny telo aminay ihany no afaka nandositra – ny vadiko, izaho ary ny zanako faralahy. Tsy afaka nandositra ny zanako lahy roa hafa ary nijanona tao an-trano nohodidin'ireo lehilahy mitàm-piadiana. Niafina tao ambadiky ny siniben-drano izahay. Antokon-tafika manokana no niditra tao amin'ny efitranoko ary nitifitra … Tsy zakanay intsony io feo io ka tena natahotra izahay. Nandositra tao anaty hady tao an-tokotanin'ny mpifanolobodirindrina aminay izahay…
Nambaran'ny bilaogy mpanohitra Turonzamin, izay matetika mamoaka ny asan'i Yusuf Jamas vao haingana, fa aroson'ireo antoko mpanohitra sy ireo Ozbeka nisintaka any ivelany ho mpifaninana amin'ny Loka Nobel-n'ny Haisoratra i Juma :
Miaraka amin'ny fanampian'ny Dr Botir Norboi dia arosonay ho mpifaninana amin'ny loka Nobel i Yusuf Juma. Nandefa taratasy ho any amin'ny komity mikarakara ny loka Nobel izy, ary nilaza fa Yusuf Juma no mpifaninana mendrika indrindra. Any am-ponja i Juma amin'izao ary miatrika fampijaliana. Mila ny fanampiantsika izy. Tsy maintsy mahafantatra ny momba ny olona tahaka azy izao tontolo izao.